Vakapotsa Vafa neCovid-19 Voyambira Vanhu Kuti Vabayiwe Nhomba Nguva Ichiripo
Nyamavhuvhu 16, 2021
Vamwe vanhu vakarwara nechirwere cheCovid-19 vasina kubayiwa nhomba vari kukurudzira vari kuzengurira kubayiwa kuti vaite izvi nekuti vakapotsa vaenda kwamupfiganebwe.
Vaimbova mupurisa muZimbabwe Republic Police VaMalvern Mudyiwa mumwe akapona nepaburI retsono mushure mekubatwa nechirwere ichi vasina kunge vabayiwa nhomba yeCovid-19. VaMudyiwa vanoti vakatozonoponera kuchipatara cheParktowen uko vakange vopihwa mweya wekufema kwemavhiki matatu sezvo vainge vozarirwa uye vagarawo vaine chirwere cheasthma.
VaMudyiwa vaendera mberi vachiti vakashamiswa apo vakapedza kugeza vakatarisa pachiringiro vakaona mufananidzo wavo wairatidza kuti vainge vasara mapfupa chete.
Vamwe vakataura neStudio 7 ndiAmai Namatirai Mutemwa vanogara kuZambia vakabatwa neCovid-19 vagara vaine chirwere chemoyo. Vanoti kunyangwe vakaburitswa muchipatara vachiri kunetseka nekufema uye vakanzi nachiremba vavo kana vave nani vabayiwe nhomba yeCovid-19.
Mumwe mugari wemuHarare kuTynwald North VaProvidence Moyo vanoti vakabhadhara mari yakawanda zvikuru kuti varapwe chirwere ichi vari kumba kwavo. Vanoti chirwere chavasiya vasinganyatsogone kumira kwenguva yakareba zvekuti kuti vaende kuri kubayiwa nhomba kune vanhu vakawanda zvinovanetsa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehutano avo varikuita ongororo yemishonga yeCovid19 Muzvare Miriam Chemhanza vanoti vakabayiwa nhomba vakatapurirwa chirwere ichi havazonyanye kurwara sevasina.
Nyanzvi munayay dzezvehutano Dr Tinashe Gede vakurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba yeCovid 19 uye kuti vasateerera zvinobuda pamadandemutande zvisingabvi kunyanzvi dzehutano pamusoro penhomba dze Covid-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna taisireva.
Vaendera mberi vachiti panguva ino yeCovid-19, chakakosha kubaiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organisation yekuti vanhu vapfeke mamasiki, vageze mawoko uye vagare vakataramukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire.
Pane gwaro rakaburitswawo nehurumende rinonzi “Covid 19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status,” riri kutsinhirawo kuti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid 19 vanhu vasina kubaiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeCovid-19 iri kutenderera munyika yeDelta variant.